Hwɛ video a yɛato din Dɛn Ne Onyankopɔn Ahenni?
Onyankopɔn Ba no yɛ Ɔhene a ɔfata efisɛ ne yam ye, na ɔyɛ nea ɛteɛ bere nyinaa. (Mateo 11:28-30) Afei nso, ɔwɔ tumi a ɔde bɛboa nnipa efisɛ ɔbɛtena soro na adi asase so hene. Bere a wonyan no fii awufo mu no, ɔforo kɔɔ soro, na ɔkɔtenaa Yehowa nsa nifa so twɛnee. (Hebrifo 10:12, 13) Awiei koraa no, Onyankopɔn maa no tumi ma ofii ase dii hene.​—Kenkan Daniel 7:13, 14.